Semalt dia manolo-kevitra ny fomba fijerena ny hosoka sy ny alàlan'ny Internet
Maro ny tompona tranonkala sy ny mpandrindra dia niaina fanandramana hosoka sy famandrihana amin'ny aterineto.Mahagaga fa tsy milaza na inona na inona ny ankamaroan'ireo niharam-pahavoazana. Matetika ireo menatra no menatra noho ny fianjerany na ny fanantenana - cronotermostato mithos manuale duso.Amin'ity lafiny ity, tena manan-danja ny tatitra momba ny fikaoniana sy hosoka an-tserasera mba hisakanana ireo mpanao heloka bevava aterineto amin'ny fanelezana toerana na olon-kafa. OneTokony hanana fanahy mitaiza. Fanampin'izany, misy fikambanana marobe izay vonona hanampy ireo tra-boina. Famonoana notontosaina tamin'ny alàlan'nyny aterineto ihany koa dia azo saziana.
Araka izany, ahoana no ahafahan'ny mpampiasa aterineto, tompon'ny tranonkala iray na mpanangom-baovao mamoaka hosoka na môtô?Inona avy ny sasany amin'ireo loharanom-baovao azo avy amin'ny tranganà / hosoka? Fantaro ato amin'ity fanoratana ity nataon'i Andrew Dyhan, mpitantana ny Success Successor Semalt .
Loharanom-baovao an-tserasera an-tserasera / hosoka.
Ny Ivotoerana momba ny Heloka Bevava Iraisam-pirenena (ICCC) no loharano voalohany azo ampiasaina. Izany diafiaraha-miasa eo amin'ny Ivotoerana momba ny Helamàna White Collar National sy ny Birao Federaly Momba ny Famotorana any Etazonia. Araka ny aterinetoNy manam-pahaizana, ICCC dia anisan'ireo sehatra tsara indrindra amin'ny fitaterana ireo olana goavana manakantsakana ny fisorohana (na ny fampidirana solosaina), Ny Theft of TradeTsiambaratelo (ara-toekarena ara-toekarena), ny fangalarana ny maha-olona ary ny fanafihana an-tserasera hafa. Na izany aza dia mbola afaka mitatitra izay heloka hafa rehetra tsy misydia tafiditra ao amin'ireo sokajy voalaza ireo na dia mahatsapa aza fa kely ny heloka bevava natao..Ankoatra izay, raha misy heloka bevava tsy latsaky ny sokajin'ny ICCC,ny fikambanana dia afaka mitarika olona iray niharam-boina. Noho izany, ny ICCC dia sehatra iray izay manokatra varavarana ho an'ireo tra-boina amin'ny aterineto sy ny hosoka.
Faharoa, manolotra tranonkala ny Bureau Business Bureau an'ny Etazonia sy Kanadaho an'ny mpanjifa izay manampy ireo niharam-boina amin'ny tranga amin'ny fitaterana fitarainana momba ireo mpivarotra an-tserasera sy ireo mpiloka hafa. Ankoatra izany, ireo niharan'ny hosokadia afaka mikaroka koa ny tahirin-kevitr'io fikambanana io mba hametrahana raha misy mpivarotra iray hafa manana fitarainana hafa napetraka taminy. Ary koa,Ireo mpangataka dia ampirisihina hanao fanaraha-maso ary hamaritra raha toa ka vahaolana ny fitarainana manohitra ny mpivarotra ety anaty aterineto.
Fahatelo, ny tranonkalan'ny governemanta Amerikana momba ny hosoka amin'ny aterineto dia iray hafalalam-panorenana ho an'ny heloka bevava aterineto. Ny sehatra dia tsara indrindra ho an'ny fitarainana toy ny fanafihana phishing, ny mailaka an-tsokosoko, ny fitarainan'ny mpanjifa izanyMikasika ny varotra an-tserasera amin'ny Internet sy ny Internet hosoka. Ny tranonkala ihany koa dia manome rohy amin'ireo sampan-draharaha sahaza izay mitatitra ny tranga momba ny trangakarazana heloka bevava an-tserasera.
Ankoatra izany, ny Craigslist dia manana pejy iray natokana ho an'ny fisorohana ny fisorohana fanampinymba hanomezana fanazavana momba ny fomba fanaovana tatitra raha toa ka nisy nanosika ny mpikambana ao amin'ny Craigslist. Misy fampahalalana bebe kokoa hita aoWebsite craigslist momba ny fomba hiatrehana olana amin'ny fotoana rehetra hitsanganany.
Ny Centre Security Security eBay dia sehatra iray hafa amin'ny Security Market General Marketplace. izanydia manampy ireo niharam-boina tamin'ny famoahana ny olana momba ny varotra sy ny famoahana ny varotra ho an'ireo manampahefana voakasika. Ankoatra izany, ny eBay Security Center dia manomefampiharana ny lalàna ho an'ny teknikam-pahefana hametraka raha manandrana manao varotra nangalatra ny mpivarotra. Tena zava-dehibe io endri-javatra ioho an'ireo niharan'ny fangalaran-trano.
Farany, ny pejy Facebook Security dia mamela ny niharam-boina amin'ny tranga mba hitatitra ny hosoka, fialonanafampiharana, hacks, spam na fanafihana hafa mifandraika amin'ny Facebook. Aza saro-kenatra. Lazao ny hosoka mba hisorohana loza.